सलमानले राखे बलिउडमा नयाँ रेकर्ड ! – Etajakhabar
सलमानले राखे बलिउडमा नयाँ रेकर्ड !
बलिउड अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री आलिया भट्ट अभिनित फिल्म इंशाअल्लाहले सुटिङ अघि नै १९० करोड भारु अर्थात् ३ करोड नेपाली रुपैया भन्दा बढी माएको छ । रिपोर्टका अनुसार संजय लिला भंसालीले यो फिल्मको थिएट्रिकल राइट्स १६५ करोड भारुमा बेचेका छन् । यसबाहेक उनले प्रोमोशन र विज्ञापनका लागि २५ करोड भारु लिएका छन् । यसरी फिल्मको मूल्य १९० करोड भारु पुगेको छ । यो हेरेपछि फिल्मको डिजिटल र सेटलाइट राइट्सले पनि उच्च मूल्य पाउने आशा गरिएको छ ।
यो फिल्ममा भंसाली र सलमान खान दुई दशकपछि सँगै फिल्म गर्दैछन् । फिल्म सन् २०२० मा रिलिज हुनेछ र चाँडै नै यसको सुटिङ सुरु हुँदैछ । भंसाली यो फिल्मलाई सलमान खानको प्रोडक्सन कम्पनी सलमान खान फिल्म्ससँग मिलेर बनाउने भएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : अक्षय कुमारलाई भेट्न ९ सय किलोमिटर हिँडेर आए उनको फ्यान
लिउड अभिनेता अक्षय कुमारले आफ्नो एउटा फ्यानलाई भेटेका छन । ती फ्यान अक्षयलाई भेट्नै भनेर ९ सय किलोमिटर हिँडेका थिए । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार द्वारिकाबाट हिँडेर आएका पर्वत नामका ती फ्यान हिँडेर मुम्बईसम्म आएका हुन् । आइतबार बिहान पर्वतको भेट अक्षयसँग भएको थियो ।
अक्षयले यो भेटबारे इन्स्टाग्राममा लेखेका छन्, ‘द्वारिकाबाट आएका पर्वतलाई भेटेँ । ९ सय किलोमिटरभन्दा बढी हिँडेर आएका छन् । १८ औं दिनमा मलाई भेट्ने उनको योजना सफल भएको छ । यस्तै योजना र प्रतिबद्धता हाम्रा युवाहरूले लिने हो भने हामीलाई केहीले रोक्दैन ।’
अक्षयले पर्वतलाई भेटेपछि सोधेका थिए, ‘मलाई आइतबार घरमै भेट्छु भन्ने कसरी थाहा पायौ ? पर्वतले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ सर, म तपाईंको फ्यान हुँ ।’
अक्षयले आफ्ना फ्यान पर्वतको प्रशंसा गरे पनि अरू फ्यानहरूलाई यस्तो काम नगर्न सुझाएका छन् । यसरी बिताउने समय बरू कुनै उत्पादनशील काममा प्रयोग गर्न उनले भनेका छन् । ‘तपाईं (फ्यान)हरूलाई भेट्नु सधैं खुसीको कुरा हो । तपाईंहरूले दिएको मायाका लागि म सधैं आभारी छु । तर कृपया यसरी आफ्नो समय र ऊर्जा खेर नफ्याँक्नुहोस्। आफ्नो जीन्दगी बनाउन खर्चिनुहोस् ।’
Posted on: Tuesday, September 10, 2019 Time: 9:41:32